लकडाउन प्रभाव : मजदुरलाई गुजाराको समस्या- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
चैत्र १९, २०७६ भीमबहादुर सिंह
(जाजरकोट) — भेरी नगरपालिका–३, स्यालाका लालवीर विकको जीविकोपार्जनको मुख्य आधार नै ज्याला–मजदुरी हो । उनका छिमेकी हरिबहादुर नेपाली पनि मजदुरी गरेरै गुजारा चलाउँछन् ।
तर, दुवैजनाले एक सातायता मजदुरी गर्न पाएका छैनन् । काम नगर्दा कमाइ शून्य भएपछि उनीहरु मात्र होइन, सबै मजदुरको घरमा चुल्हो बल्न समस्या भएको छ । दैनिक एक हजार रुपैयाँ जति कमाएर पाँच जनाको परिवार पाल्दै आएका लालवीर काठको काम गर्ने दक्ष मिस्त्री मानिन्छन् । ‘काम गर्न नपाए कसरी परिवारको पेट पाल्ने ?,’ उनले भने, ‘घरमा खाद्यान्न स्टक छैन, पसलमा उधारो पनि मिल्दैन ।’ चामल, तरकारी, तेल, दाल र मासु किन्ने रकम नहुँदा चैतेदसैं समेत खल्लो भएको उनले सुनाए ।
हरिबहादुरले काम गर्न नपाउँदा ऋण लिएर खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नुपरेको दु:खेसो पोखे । ‘हुनेखानेका घरमा चैतेदसैंको रमाइलो होला,’ उनले भने, ‘हाम्रो घरमा चुलो बल्न धौधौ भइसक्यो ।’ एक सातासम्म लकडाउन हुँदा सबैभन्दा बढी मजदुर परिवार समस्यामा परेको उनको गुनासो छ ।
उनले लकडाउन सुरु भएयता घरमा तरकारी नपाकेको सुनाए । ‘सुख्खा दाल र भात खाएर चैतेदसैं मनाइयो,’ उनले भने, ‘मजदुरी गर्न पाएको भए आजको दिन त मासु पाक्थ्यो होला ।’ सदरमुकाम खलंगामा दैनिक मजदुरी गरेर गुजारा चलाउनेलाई कतैबाट पनि राहतको व्यवस्था नभएको उनी बताउँछन् । उनका अनुसार सदरमुकाम खलंगा आसपास मात्रै गिट्टी कुट्ने, काठको काम गर्ने, सामान ओसारपसार गर्ने, भौतिक संरचना निर्माण गर्नेलगायत काममा करिब तीन सय बढी मजदुर सक्रिय छन् ।
जाजरकोटमा करिब ६ हजार परिवार मजदुरीमा निर्भर रहेको सरकारी तथ्यांक छ । जिल्लामा ज्याला–मजदुरी गरेर पेट पाल्नेको संख्या झण्डै २५ हजार रहेको निर्माण व्यवसायी संघका अध्यक्ष कृष्णविक्रम शाहले दाबी गरे । जग्गाजमिन र घरबारविहीनलाई मजदुरी गरेर गुजारा चलाउनुको विकल्प नभएको उनी बताउँछन् ।
संक्रमण रोक्न स्थानीय सरकारको सक्रियता
कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन स्थानीय तहले विभिन्न प्रतिकार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गरिरहेका छन् । पालिकाहरुले कोरोना संक्रमण रोक्न हेल्थ डेस्क स्थापना, सचेतना कार्यक्रम, क्वारेन्टाइन निर्माण, प्रतिकार कार्यदल परिचालन, विपद् कोष स्थापनालगायत काम गरिरहेका हुन् ।
जुनीचाँदे गाउँपालिकाले भारत र खाडी मुलुकबाट आएका २७ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सर्वदल शाहीले बताए । ‘सबै घरधुरीमा नि:शुल्क साबुन वितरण गरेका छौं,’ उनले भने, ‘स्थानीयको स्वास्थ्य जाँच र सचेतनाका लागि गाउँगाउँमा स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको छ ।’
भेरी नगरपालिकाले ५६ वटा टोलस्तरीय प्रतिकार कार्यदल गठन गरी परिचालन गरेको छ । कार्यदलले प्रत्येक दिन गाउँ–टोलमा स्वदेश तथा विदेशबाट आएकालाई निगरानी गर्ने, होम क्वारेन्टाइनमा बस्न लगाउने र तथ्यांक संकलन गरी नगरपालिकालाई बुझाउने जिम्मेवारी पाएको नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीले बताए । उनका अनुसार कोरोना संक्रमण रोक्न तीन सय २७ जना युवालाई गाउँमा परिचालन गरिएको छ ।
बारेकोट गाउँपालिकाले कोरोना भाइरस संक्रमण, रोकथाम, नियन्त्रणका लागि २० लाख रुपैयाँको विपद् कोष स्थापना गरेको छ । कोषमा कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मीलगायतको तीनदेखि सात दिनको तलबसमेत जम्मा गर्ने निर्णय भएको गाउँपालिका अध्यक्ष महेन्द्रबहादुर शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार स्थानीय सामग्री प्रयोग गरी स्वास्थ्यकर्मीले लगाउने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पीपीई) निर्माण गरी वितरण गरिएको छ । १० स्वास्थ्यचौकी र दुई हेल्थ डेस्कमा ४५ स्वास्थ्यकर्मीलाई सचेतना र उपचारमा खटाइएको छ ।
जिल्लाभरि भारतलगायत अन्य देशबाट आएका दुई सय पाँच जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिए । उनका अनुसार भारतबाट आएका एक सय ८९ र अन्य मुलुकबाट आएका १४ जनालाई स्वास्थ्यकर्मीको निगरानीमा होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । भेरीमा ८२, नलगाडमा ११, छेडागाडमा १८, कुशेमा ६, बारेकोटमा सात, जुनीचाँदेमा ३७ र शिवालयमा १८ जनालाई होम क्वारेन्टाइनमा राखिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार जुनीचाँदेमा २७ जना क्वारेन्टाइनमा छन् । प्रकाशित : चैत्र १९, २०७६ १६:५४
भाइरसको न देश हुन्छ, न भूगोल, न राजनीतिक उद्देश्य । त्यसैले यसको रोकथामका लागि सरकार अझै युद्धस्तरमा लाग्नुपर्छ ।
चैत्र १९, २०७६ गंगा बीसी
काठमाडौँ — स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले हरेक दिन सवा चार बजे गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा सबैको ध्यान जान्छ, ‘आज फेरि कोभिड १९ का थप संक्रमित देखिए कि ?’ संक्रमित नभेटिएको थाहा पाएपछि होम क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूले सन्तोषको सास फेर्छन् ।
कसैको रिपोर्ट पोजेटिभ रहेको जानकारी दिएका दिन घरघरमा बसेकाहरूको अनुहारमा त्रासको बादल मडारिन्छ । ‘आज पोजेटिभ परिणाम देखिए पनि भोलि नदेखियोस्,’ उनीहरू कामना गर्छन् । मंगलबारसम्म पाँच जना कोरोना संक्रमित देखिएका छन्, तीमध्ये एक जना निको भइसकेका छन् ।
कामना वा चाहनाले मात्र पूरा संक्रमण रोकिने होइन । विश्व नै महामारीले पिल्सिएका बेला हाम्रो जस्तो गरिब मुलुकका लागि जहिले पनि जोखिम रहन्छ । यहाँ झिल्को सल्किसकेको छ, डढेलो लाग्न मात्र बाँकी हो कि भन्ने त्रास छ ।
मुलुकलाई एक साता लकडाउन गरेपछि सरकारको हिम्मत केही बढेको देखिन्छ । यसबीचमा कोरोनाका जम्मा तीन नयाँ बिरामी देखिए । मंगलबारसम्म एक हजार ६० जनाको नमुना परीक्षण भएको छ । विज्ञहरूले परीक्षणको दायरा व्यापक बनाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन् । परीक्षण जति बढायो, उति संक्रमणबारे यथार्थ थाहा हुने उनीहरूको तर्क छ ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मंगलबारको पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका सल्लाहकार विज्ञ डा. खेम कार्कीले खासगरी ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूले खेतीपाती र वनपातको काम गर्न सक्ने बताए । यसको अर्थ हो, गाउँमा लकडाउन खुकुलो पारिनु । लकडाउनको एक साता सरकार बढी सशंकित देखिन्थ्यो, एक सातापछि उसको अलि आत्मविश्वास बढेको जस्तो देखिन्छ । हुन त सरकारका लागि अझै दुई साता कोरोना भाइरसविरुद्ध लड्ने अग्निपरीक्षा छ ।
हाल संक्रमित भएका सबै व्यक्ति विदेशबाट आएका हुनाले यसलाई पहिलो चरणको संक्रमण मानिन्छ । विदेशबाट आएकाहरूले अरु कतिलाई सारे, त्यसको अझै पुष्टि हुन बाँकी छ ।
विदेशबाट आएका संक्रमित र अरु क्वारेन्टाइनमा बसेका व्यक्तिहरूको सम्पर्कमा आएकाको जति सक्यो छिटो परीक्षण गर्न आवश्यक छ । कोरोना भाइरस संक्रमणले दोस्रो चरणपछि महामारीको रूप लिने खतरा रहन्छ । संक्रमणलाई दोस्रो चरणमा रोक्ने चुनौती सरकारसमक्ष छ ।
दुई साता अग्निपरीक्षा
सरकारका लागि दुई साता अग्निपरीक्षाको घडी हो । शंकास्पद व्यक्तिको परीक्षण जति धेरै बढायो, उति ढुक्क हुने अवस्था आउने विज्ञहरूले औंल्याएका छन् । राजधानीबाहिर धरानमा नमुना परीक्षण सुरु भइसकेको छ भने पोखरालगायत प्रदेशमा परीक्षण तयारी भइरहेको छ ।
कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा ‘क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी)’ ले तीव्र गतिमा काम गर्ने सरकारको दाबी छ । संक्रमणको पहिलो चरणमा सरकारका लागि पहिलो अग्निपरीक्षा थियो । टेकुबाहेक अरु अस्पतालको व्यवस्था गर्नु, क्वारेन्टाइनको लेखाजोखा गर्नु, विदेशबाट आउने व्यक्तिको निगरानी गर्नु र सबैभन्दा सकस मेडिकल सामग्री जुटाउनु थियो । पहिलो चरणमा केही मेडिकल सामान आइसकेको छ ।
लकडाउनसँगै सरकारले आर्थिक राहत प्याकेज घोषणा गरेको छ । यद्यपि आर्थिक प्याकेज कार्यान्वयनका लागि अझै केही समय लाग्नेछ । क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरका संयोजक पोखरेलले कोरोना संक्रमण रोकथामको काम प्रभावकारी ढंगले हुने बताए । ‘एक्सन ओरेन्टेड भएर काम हुनेछ,’ उनले भने, ‘सबै मिलेर संक्रमणलाई परास्त गर्नर्पुर्छ । सरकार इमान्दारिताका साथ युद्धस्तरमा काम गरिरहेको छ ।’
भाइरसको कुनै सीमा र भूगोल हुँदैन भन्ने यतिबेला देखिएको छ । न यसको कुनै राजनीतिक उद्देश्य हुन्छ । यसको भूगोल र सीमा भएको भए, उद्देश्य भएको भए अनुमान गर्न सजिलो हुन्थ्यो । चीनले जसरी कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण लियो, उसलाई तीन महिनाभन्दा बढी लाग्दैछ । युरोप, अमेरिका यतिबेला चर्को संक्रमणको सामना गरिररहेका छन् । उनीहरूले यसलाई नियन्त्रण गर्न कति समय लाग्छ ? अनुमान गर्न गाह्रो छ ।
सरकारको क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टरका संयोजक एवं उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको भनाइ पनि यस्तै छ, ‘कोरोना भाइरस कुनै राजनीतिक विषय होइन । यो मेडिकल विज्ञानको विषय हो । भाइरसको कुरा भयो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘यसको अनुमान गर्न गाह्रो छ तर हामी पूरा शक्तिका साथ यसविरुद्ध लडिरहेका छौं ।’
दक्षिण एसियामा कोरोना भाइरस प्रवेश गरेको करिब दुई महिना हुँदैछ । चीनको अनुभव हेर्ने हो भने अझै एक महिना हाम्रालागि चुनौती छ भन्न सकिन्छ । दुई साता लकडाउनपछि नेपाल सरकारले सायद संक्रमणको आंकलन गरी एक साता थप लकडाउन लम्ब्याउन सक्छ । यसरी हेर्दा २०७७ को नयाँ वर्षको बेलासम्म नेपाल पूर्णरुपमा खुला कि ?
आजभोलि हरेक दिन उठ्नेबित्तिकै धेरेको चासो हुन्छ, ‘आज थप कोरोनाका बिरामी भेटिए ?’ सञ्चारमाध्याम हेर्छन्, सामाजिक सञ्जाल चहार्छन् ।
उनीहरूको आशा त त्यही दिनको छ, जुन दिन मान्छे खुला रुपमा यात्रा गर्न सकुन्, किनमेल गर्न सकुन् । एक–अर्कालाई अंगालो हाल्न सकुन्, हात मिलाउन सकुन् । अहिलेको बेला एक–अर्काबीच दुरी कायम गर्ने भएकाले त्यो आशाको दिनको पर्खाइ हो । त्यो भनेको कोरानो संक्रमणविरुद्ध लडाइँ जितेको दिन हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली यतिबेला मृगौला प्रत्यारोपणपछि स्वास्थ्य लाभ गरिरहेका छन् । उनी हरेक दिन खासगरी उपप्रधानमन्त्री पोखरेललगायत सम्बन्धित निकायसँग कोरोनाबारे चासो लिइरहेका हुन्छन् । यो प्रधानमन्त्री ओलीका लागि मात्र होइन, नेकपा पार्टीका लागि समेत परीक्षाको घडी हो ।
विश्वभर संकट निम्त्याइरहेको कोरोनाले स्वास्थ्य क्षेत्र मात्र होइन, राजनीतिक र आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो प्रभाव पारिरहेको छ । सरकारले राजनीतिक निर्णयका आधारमा कारोनाविरुद्ध कसरी काम गर्छ ? आगामी दिनमा सरकार सञ्चालन गरेको पार्टीका लागि राजनीतिक परीक्षा हुनेछ । कोरोना भाइरसको असरले विश्वमा आर्थिक गतिविधि ठप्प छन्, त्यसको असर खासगरी गरिब देशका लागि बढी हुनेछ ।
नेपाल भारत, चीनको तुलनामा थोरै जनसंख्या भएको देश हुनाले सरकारको दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने काम गर्न कठिन छैन । महामारीमा संकट मात्र हुँदैन, अवसर पनि हुन्छ । नेकपा सरकारका लागि पनि यो काम गर्ने अवसर छ ।
‘भाइसरविरुद्धको लडाइँमा सिंगो देश एक ठाउँमा छ, सकेजति सरकारले काम गरिहेको छ,’ उनले भने, ‘संक्रमणविरुद्धको जित सबै नेपालीको जित हुनेछ ।’ नेकपा सरकारले एक प्रकारले युद्धकै घोषणा गरी काम गर्ने बेला आएको छ ।
केही दिनअघि वुहान पुगेका बेला चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले कोरोनाविरुद्ध विजयोन्मुख लडाइँ भएको उल्लेख गर्दै भनेका थिए, ‘वुहानको जित, हुबेइको जित, समग्रमा चीनको जित हो । यो महामारीविरुद्धको जनयुद्ध हो ।’
प्रकाशित : चैत्र १९, २०७६ १६:४७